တရုတ်နိုင်ငံ Ding Xiang Pi စက်ရုံမှ ပံ့ပိုးပေးသော သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များ လေးညှင်းပွင့် အခေါက် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |အကောင်းဆုံး
Ding Xiang Pi စက်ရုံမှ ထောက်ပံ့သော သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များ လေးညှင်းပွင့် အခေါက်
တရုတ်အမည် ding xiang
လက်တင်အမည်- Eugenia caryophμllataThunb။
ပင်မလုပ်ဆောင်ချက်- ခန္ဓာကိုယ်အလယ်ပိုင်းကို ပူနွေးစေခြင်း၊ ဆိုးရွားသော တုံ့ပြန်မှုများကို လျှော့ချပေးခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ကို သန်မာစေခြင်းနှင့် Yang တို့ကို ကူညီပေးသည့် အာနိသင်ရှိသည်။
လေးညှင်းပွင့်သည် တရုတ်တိုင်းရင်းဆေး၏ အမည်ဖြစ်သည်။Eugenia caryoph သည် Myrtle အပင်ဖြစ်သည်။μ လတ္တာ Thunb ၏ဘူးသီးခြောက်။ဘူးသီးများသည် အစိမ်းမှ အနီရောင်သို့ ပြောင်းလာသောအခါ ခူးဆွတ်ပြီး နေပူတွင် အခြောက်ခံသည်။ထုတ်ကုန်သည် အနည်းငယ်ရှည်လျားပြီး 1-2 စင်တီမီတာရှိသည်။Corolla သည် စက်လုံးဖြစ်ပြီး အချင်း 0.3-0.5cm ရှိသည်။ပန်းပွင့်များသည်4ပွင့်၊ အရောအနှောဖြစ်ပြီး အညိုရောင် သို့မဟုတ် အဝါရောင်ရှိသည်။ပန်းပွင့်များတွင် ၀တ်ဆံဖိုများနှင့် ပုံစံများရှိသည်။အဝါရောင်နှင့် အစေ့လိုက် အစေ့အဆံများ အများအပြားကို ကြိတ်ချေပြီးပါက မြင်နိုင်သည်။Calyx tube cylindric၊ အနည်းငယ်ပြား၊ အနည်းငယ်ကွေးပြီး၊ 0.7-1.4cm အရှည်၊ အချင်း 0.3-0.6cm၊ နီညိုရောင် သို့မဟုတ် အသားညိုရောင်၊ အပေါ်ဘက်တွင် တြိဂံ sepal4ခု၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်ခြားထားသည်။အစိုင်အခဲနှင့်အဆီပြန်။အနံ့ပြင်းသော၊ စပ်သောအရသာနှင့် ထုံသောလျှာခံစားမှုတို့ရှိသည်။
နွေးထွေးစေပြီး မကောင်းတဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကို လျှော့ချပေးကာ ကျောက်ကပ်ကို သန်မာစေကာ Yang ကို ကူညီပေးပါတယ်။
သရက်ရွက်နှင့် အစာအိမ်ချို့တဲ့ခြင်း၊ ကြို့ထိုးခြင်းနှင့် အော့အန်ခြင်း၊ အစာနည်းခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းနှင့် ဝမ်းလျှောခြင်း၊ နှလုံးနှင့်ဝမ်းဗိုက်အအေးမိခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့် ပန်းသေခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်။
1. "Zheng Yin Mai Zhi" Dingxiang Shidi Tang- Dingxiang၊ Shidi၊ ဂျင်ဆင်း၊ ဂျင်း။အအေးမိခြင်းကြောင့် နာတာရှည် ကြို့ထိုးခြင်းကို ကုသခြင်း။
2. Dingguisan: လေးညှင်းပွင့်နှင့် သစ်ကြံပိုးခေါက်။epigastric နာကျင်မှု၊ ချက်လုပ်ဝမ်းဗိုက်အအေးမိဝေဒနာ၊ ဝမ်းလျှောခြင်းအပြင် ခွဲစိတ်ခန်းသုံးအနာရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဒဏ်ရာအဖုအကျိတ်နှင့် နာကျင်ခြင်းနှင့် အခြားရောဂါလက္ခဏာများကို ကုသခြင်း။
3. နောက်ဆုံးသော kudingxiang သုံးမျိုးရှိသည်။ရေနှင့်ယူ၍ တံတွေးထွေးခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါ။
1-3g၊ ပါးစပ် သို့မဟုတ် အပြင်တွင်
ဘူးသီးများသည် အစိမ်းမှ အနီရောင်သို့ ပြောင်းလာသောအခါ ခူးဆွတ်ပြီး နေပူတွင် အခြောက်ခံသည်။
အညစ်အကြေးများနှင့် မျက်နှာပြင်ဖုန်မှုန့်များကို ဖယ်ရှားပါ။အချိန်မီ မွှေပါ။
ယခင်- Gao Liang Jiang တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ လက်ကား Alpinia Officinarum
နောက်တစ်ခု: Da Yun ရိုးရာတရုတ်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ Herba Cistanches
hua shi တရုတ်ရိုးရာ meidicne speckstone...
Shui Zhi တရုတ်တိုင်းရင်းဆေး Leech Fo...
he zi China ဆေးဖက်ဝင်အပင်ကြမ်း အခြောက်လှန်း...
sha yua zi ဆေးဖက်ဝင်အပင်ခြောက် Flatstem Milkve...
Bu Gu Zhi Health Herb စျေးနှုန်းအကောင်းဆုံး Psoralea Coryl...
Hu Po တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ Succinum Resin